Maalqabeenka Dugsiga Sare ee Idle – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
Maalqabeenka Dugsiga Sare ee Idle – Khiyaamo&Hack
Waxaa qoray Editor | Sebtembar 29, 2021
Weligaa ma ku riyootay inaad maamulato dugsi?
Markaa waa waqtigii lagu noqon lahaa dugsiga! U diyaargarow inaad maamusho nolol maalmeedka dugsiga ee ardaydaada!
Ka marag furo aqoontooda korodhka iyo buundooyinka imtixaanku way fiicnaanayaan markaad cusboonaysiiso xiisadahaaga. Shaqaalayso macalimiinta ugu fiican si aad wax u barato si hufan ishana ugu hayso ardaydaada’ fayoobid!
Sida dugsigaagu u korayo, waxaad dhisi doontaa fasallo badan, baro maadooyin kala duwan, oo ay dhigtaan arday badan. Dugsigaagu wuu socon doonaa xataa adiga oo aanad ciyaarin, markaa waxaad sii wadi doontaa inaad hesho lacag caddaan ah xitaa markaad offline tahay!
ILE SCHOOL SARE TYCOON
– Noqo maamulaha dugsiga oo maamul dugsi sare!
– Maamul ardaydaada markay raacayaan baska dugsiga, ka qayb gal xiisadaha, oo booqo maqaaxida
– Ka faa'iidayso maalgelinta lacagta si aad kor ugu qaaddo sumcaddaada oo aad u noqoto hodan!
– Dhis jiliddaada milyaneer ee aan shaqayn!
– Kor u qaad qalabka dugsigaaga si loo kordhiyo buundooyinka imtixaankaaga!
– Ku kordhi lacagtaada khadka tooska ah ama khadka tooska ah ciyaartan maalqabeenada ah!
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha dugsiga sare, Markaa Idle High School Tycoon waa jileeyaha ciyaarta tycoon saxda ah si kor loogu qaado hal-abuurkaaga. Hesho lacag caddaan ah si aad u horumariso fasalladaada oo aad u sameyso isbedel dhan oo dugsigaaga ah. Bar maadooyinka aad jeceshahay: xisaabta, fiisigiska, kimistari, taariikhda, iyo juqraafiga. Diyaar ma u tahay inaad bilowdo nolosha sheekadaada dugsiga sare? Horumari fasalladaada, shaqada guriga u dhiibo oo diyaari imtixaanada, ciyaar sidoo kale offline. Noqo maal-qabeen run ah oo aan shaqayn oo u diyaargarow isbedel dhammaystiran oo dugsigaaga ah: dugsigaaga cusboonaysii oo lacag badan samee.
Tani maaha sida ciyaaraha kale ee dugsiga sare ee shaqo la'aanta ah, jileeyaha dugsiga sare wuxuu ku siin doonaa fursad aad ku maamusho macalimiinta iyo ardayda oo aad dib u xasuusato maalmaha nolosha dugsiga, Si degdeg ah lacag caddaan ah ugu kasbato ciyaartan xiisaha badan ee jilitaanka caajiska ah. Ku noqoshada dugsiga waligeed kuma fududayn ciyaartan dugsiga sare. Noolow sheekadaada dugsiga sare, Isticmaal faa'iidadaada shaqo-la'aanta ah si aad si buuxda u hagaajisid dugsigaaga sare, wax soo saar leh oo lacag badan samee! Ku kordhi farxadda ardaygaaga ciyaartan aan shaqayn adiga oo maareynaya nolol maalmeedkooda dugsiga, ha ku nastaan ​​maqaaxiyaha, cun sandwich ama donut. Waxaad sidoo kale jeclaan doontaa inaad ku soo laabato dugsiga ciyaartan caajiska ah ee xiisaha badan.
Ma waxaad noqon doontaa maalqabeen run ah oo aan shaqayn jiliyaha dugsiga sare ee madadaalada leh? Ciyaartan jilitaanka ee tycoon waxay kugu celin doontaa dugsiga, laakiin markan waxaad noqon doontaa qofka maamula dugsiga sidii adigoo maamule ah. Hubi in ardaydaadu aad u yaqaaniin maadooyin badan, sida xisaabta, fiisigiska, kimistari, iyo taariikhda. Samee lacag badan xitaa marka aad offline tahay si aad u noqoto dugsi sare oo milyaneer ah, maalqabeen aan shaqayn.
Ma ogtahay in ay sidoo kale maqaaxi ku taal Idle High School? Maamul ardaydaada sidoo kale inta lagu jiro nasashada oo u ogolow inay haystaan ​​donut ama sandwich, intaad lacag badan kasbanayso oo aad farxada ardayda kordhiso. Horay ma u heshay lacag caddaan ah? Kadib bilow mashruucaaga is-beddelka, balaadhi fasalada cusub iyo kuwa jira, kuna soo dhawoow ardayda ciyaartan dugisga sare ee maalqabeenka ah ee aan shaqayn. Ma noqon doontaa maamule wanaagsan? Ku caddee adiga oo hubiya in ardaydaadu ay fasalada soo xaadiraan, shaqaaleysiinta macalimiinta ugu fiican, iyo inbadan oo jidka aad ku noqon karto maalqabeen maalqabeen ah jilitaanka ciyaarta aan shaqayn ee aad jeclaan doonto.
Diyaar ma u tahay inaad noqoto maalqabeen maalqabeen ah ciyaartan shaqo la'aanta ah ee kugu celinaysa dugsiga? Bilow hadda beddelka dugsigaaga dakhliga faa'iidada leh ee faa'iido darrada ah si aad u sameyso mashruuc dib u habeyn ah oo aad u ballaariso fasallo badan. Ma jiro ciyaar kale oo maalqabeenno ah oo aad jeceshahay sida dugsiga sare ee aan shaqayn!
Shuruudaha iyo Shuruudaha:
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, High, Iidle, Dugsiga, Tycoon
← Ilaalada kaadhka: Deck Building Roguelike Card Game Khiyaamada&Hack Duel School Infinite: Sexy Super Power Anime Game Cheats&Hack →